Insimbi Yokushaya Izinsimbi - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Isevisi Yokuvikela Ngokushesha
Insimbi Yokushaya Izinsimbi
Ukunyathela kwensimbi okwenziwe ngokwezifiso kwe-Anebon kufaka phakathi ukushaya isibhakela, ukugoba, ukwelula, ukwenza eminye imisebenzi. Inqubo ngayinye yenziwa kusetshenziswa amathuluzi aklanyelwe i-CAD / CAM anganikeza ukucacisa okudingekayo kwezingxenye eziyinkimbinkimbi. Ishidi lokunyathela ishidi kuyindlela esheshayo nephumelelayo yokukhiqiza izingxenye eziqinile, ezisezingeni eliphakeme zehadiwe, i-aerospace, ezokwelapha, i-elekthronikhi, izimboni, ukukhanyisa nezinye izimboni. Sizosebenzisa imishini yethu ethuthukile nethimba elinolwazi ukwenza ngokwezifiso imikhiqizo oyicabangayo, futhi sikholelwa ukuthi singahlangabezana nezidingo zakho zombili ngokwenani nekhwalithi.
Singanikeza izinketho ezilandelayo zokukhiqiza:
Izakhi ezijulile ezidwetshiwe
Ukubhola, ukuthepha nokusebenzisa kabusha
I-Spot kanye ne-projection welding
Ukushisela kwe-CO2 - okwenziwa ngesandla kanye nerobhothi
Inqubo Yokushaya Insimbi
Yize ingaguqulwa ukuze yenze izingxenye ezithile, ukunyathela insimbi yethu kuvame ukulandela izinyathelo ezifanayo ezinhlanu:
Ukubuyekezwa komklamo:Onjiniyela bethu bazobuyekeza ingxenye yedizayini ngokuningiliziwe ukuqinisekisa ukuthi ilungele ukugxivizwa kwensimbi. Lokhu kufaka ukuhlaziywa okujulile kobukhulu bengxenye, izinto zokwakha, izilinganiso zokwelula nokubekezelelana okudingekayo.
Cindezela Ukukhethwa: Onjiniyela bethu bazonquma ubukhulu nosayizi womshini ofanele kakhulu ngosayizi wengxenye nezinto ezibonakalayo.
I-3D Virtual Prototype:sebenzisa isoftware ebonakalayo ukudala ama-prototypes wezingxenye. Ngaphambi kokuba inqubo yokukhiqiza iqale, uhlobo oluthile luqhutshwa ngenombolo enkulu yokulingiswa kokusebenza ukuthola noma yiziphi izinkinga zokwakha.
Ukusetha Izinsiza kusebenza: Onjiniyela bethu abanamakhono bahlola usayizi nezidingo zezinto ezisetshenziswayo bese behlela ukusetjenziswa.
Inqubo:Beka insimbi noma insimbi ingenalutho esikhunjeni bese uyilungisa. Bese wenza kusebenze umshini wokunyathelisa bese uqala ukusebenza ngamandla angasetshenziswa. Phinda inqubo kuze kube yilapho ingxenye ifinyelela usayizi nomumo oyifunayo.
Ukuklanywa nokwenziwa kwamathuluzi okuqhubekela phambili nokunemba kuyingxenye yesithembiso sokuletha isixazululo esiphelele sokukhiqiza ukukhiqizwa kwezinsimbi ezicindezelweyo.
Namuhla, sisebenzisa ubuchwepheshe bethu bendlu ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingabizi kakhulu zesikhunta.
Singabuyisa emuva ukuklama umkhiqizo noma umdwebo wobunjiniyela we-CAD ukukhiqiza ithuluzi lomshini elingakhiqiza umkhiqizo wakho. Isikhunta amathuluzi aqinile kakhulu futhi athembekile, anomjikelezo wokuphila omude, ngakho-ke izindleko zingathathwa njengokutshalwa kwemali.
Ithuluzi lesikhunta kuzoba ngelakho, kepha singakwazi ukuligcina, sililungise futhi sililungise lapho kudingeka.
Ishidi Lokubumba Kwensimbi
Njengethuluzi eliphelele nasesitolo sokufa, sinamakhono kuzo zonke izindawo zokubumba kufaka phakathi i-fiber laser, i-CNC isibhakela, ukugoba i-CNC, ukwakha i-CNC, ukushisela, imishini ye-CNC, ukufakwa kwehadiwe nokuhlangana.
Samukela impahla eluhlaza emashidini, amapuleti, imigoqo noma amashubhu futhi sinolwazi ekusebenzeni ngezinto ezahlukahlukene njenge-aluminium, ithusi, insimbi engagqwali nezinsimbi zekhabhoni. Ezinye izinsizakalo zifaka ukufakwa kwehardware, i-welding, ukugaya, imishini, ukujika nokuhlangana. Njengoba inani lakho landa futhi sinenketho yokusebenzisa kanzima izingxenye zakho ukuze zisebenze emnyangweni wethu wokunyathela izinsimbi. Izinketho zokuhlola zisukela ekuhlolweni kwesici esilula yonke indlela nge-FAIR ne-PPAP.
Imikhiqizo yensimbi ye-Anebon Co., LTD